Izindaba - Umkhuba Wokuthuthuka Wemikhiqizo Yokubumba Ingxubevange Enkampanini Yethu
Inkampani yethu ibilokhu ikhula embonini yempuphu yokubumba imikhiqizo iminyaka engu-6, lapho intuthuko enkulu yenziwe. Ikakhulukazi, imikhiqizo yokupakisha enobungani kanye netafula elilahlwayo elinemvelo lisetshenziswe kabanzi, kepha kusenemikhawulo eminingi ekwakhiweni kwemikhiqizo ebunjiwe yenkampani yethu.
(1) Nakuba imikhiqizo uginindela udini ziye zathuthuka iminyaka eminingi, izinga ukusetshenziswa emakethe alikho phezulu, esinye sezizathu ezibalulekile ukuthi izindleko isikhunta liphezulu kakhulu, abanye abakhiqizi ekwakhiweni isikhunta uzocabangela indlela yokwenza it has yizinhlobonhlobo ezinhle, ukwandisa izinga ukusetshenziswa isikhunta, ukunciphisa izindleko. Isibonelo, i-liner ene-cored esetshenziswa kakhulu, i-Angle guard, i-baffle, njll., Ngoba inani lokukhiqiza, i-batch enkulu, okuholela ekusetshenzisweni okuphezulu kwalezi zisikhunta, kunciphisa kakhulu izindleko zalo, okungajwayelekile kubhekwe ngabakhiqizi baseChina. Ngakho-ke, ukwakheka kwesikhunta nokulungiselela kuyindlela ebalulekile yentuthuko. Eminyakeni yamuva, inkampani yethu ihlela ukufaka kancane kancane ekwakhiweni nasekukhiqizeni isikhunta. Sethemba ukuthi eminyakeni embalwa ezayo ukufeza ukukhiqizwa kwethu kwesikhunta.
(2) Ucwaningo olunganele ngokulungiswa kwesilayidi, luzoholela ekukhiqizweni kwemikhiqizo ye-pulp epulasitiki ayikwazi ukuhlangabezana nezakhiwo ezithile zomzimba, ngakho-ke ayikwazi ukuhlangabezana nezidingo zangempela.ukuze uthuthukise ikhwalithi yomkhiqizo, imboni yethu isebenzisa ngqo uginindela wangempela njenge uginindela wokhuni, uginindela woqalo, uginindela womoba, okuholela ezindlekweni eziphezulu. Ngakho-ke, inkampani yethu izoqinisa ucwaningo kanye nokuthuthukiswa kwemikhiqizo ye-pulp yokubumba izinto zokusetshenziswa, futhi kuze kube sezingeni elithile, ikhuphule ukusetshenziswa kabusha kanye nokusetshenziswa kwamabhokisi wamaphepha kadoti, iphepha lodoti neminye imicu yesibili, ukuze kuzuzwe umqondo wangempela wokuvikelwa kwemvelo .
(3) Ngenxa yesakhiwo esiyinkimbinkimbi semikhiqizo ye-pulp ebunjiwe esetshenziselwa imikhiqizo yezimboni, akukho ukwelashwa okusebenzayo ngemuva, okuholela ekudayweni okungalingani, okulula ukufiphala, ukulahleka kwezinwele, ifomu elilodwa kanye nezinye izenzakalo kufektri ebunjiwe yemikhiqizo yezimboni imikhiqizo, ethinta kakhulu ukusetshenziswa kwayo. Kuyathenjwa ukuthi isimo singathuthukiswa ngokwengeza inqubo esebenzayo yokwelashwa ngemuva kwesikhathi esizayo, ukuze kwenziwe ukusetshenziswa kwayo kabanzi.
(4) Okwamanje, imikhiqizo ye-pulp yokubumba kunzima ukuthi isetshenziswe njengesihlalo semikhiqizo emikhulu yosayizi, njengesiqandisi, ama-air conditioner nezinye izinto ezisindayo zasendlini. Ungayithuthukisa kanjani amandla ayo wokusebenza ngokusebenzisa i-sizing optimization, ukuthuthukiswa kwemishini, ukwakheka kwesikhunta nokuhlanganiswa nezinye izinto zokuvikela imvelo ukuhlangabezana nezidingo zemikhiqizo emikhulu yosayizi, okuyindlela ebaluleke kakhulu yokwakhiwa kwempahla yokupakisha epulasitiki.
Udayi Umthoyi Tray, Ukudaya Ukusonga Umtfumbu Holder, Izimonyo Mf Box, Ibhokisi Lokupakisha Ukudla, Pulp Cup Umnikazi, Ukupakisha Ukupakisha Kwekhadibhodi,